HomeAfaan OromooIbsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Mooraa Yuuniversiitii Jimmaa irraa kenname!
1. Mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamuuf!
2. Oromoo lagaan qoqqooduun shiraan wal nyaachisuun nurraa haadhabbatu, Oromoorraa dhalannee Oromoo taanee, Oromoof jiraanna. Nuti tokko!
3. Abbootii siyaasaa Oromoo haalduree tokko malee hidhaafi ugguraan mootummaa dararuun haadhabbatu.
Hidhaan Oromoof ichima ta’ee hinhafne. Nuyi walaba taanee dhalanne, walaba taanee jiraachuufis mirgi keenya mulqamuum daba. Kanaafuu hidhamtoota Oromoo daa’imaa haga jaarsaa, qarree fi Qeerroon keenya hiraarfama hamaa dhaan rakkisuun haadhabbatu. Nuuf hiikaa!
4. Barattoota Oromoo mooraa keessatti barannu keessatti gandaan qooduun barnootaarra arii’uun hiraarsuufi mogolee buusuun hojimaata gara jabummaan xiinsammuu miidhuun haadhabbatu. Jimmaan kan Oromooti, hiddi keenya tokko. Walab_galeessa tokkorraa kaane. Barattoota Oromoo gandaan qooduun fafa. Nurraa dhaabbadhaa!
5. Barattoota keenya bara darbe mooraadhaa haalduree tokko malee jifachuun mooraadhaa ariitan dhiifama gaafachuun waamicha taasisuufi qabdu. Mooraan keenya ilmaan xoophiyaaf maaddii beekumsaa ta’ee ilma Oromoof ajaafi raqa ta’uun irra hinjiraatu. Kanaafuu mooraan daba raawwateef dhiifama gaafachuun akka mooratti nuufdeebisu gaafanna.
6. Filannoon biyyaalessaa mootummaan karaa miidiyaa hawaasummaa isaan lallabaa oolu kun haga paartileen Oromoo ABO fi KFOn keessa hinjiraatiiniitti Oromoof homaa hiikaa hinqabu. Paartiilee Oromoo, Oromoof baaxii ta’an duubatti handaarsaa waa’ee filannoo dubbachuun doofummaadha. Oromoof waan kun hinmalu. Nuti kan feenu mootummaa ce’umsa biyyaalessa Oromooti.
7. Oromoon saba guddaa ta’ee osoo jiruu iddoo hundatti salphifamuu, gidirfamuun irra hinjiraatu.